टीकापुर सिटी बसपार्क व्यवस्थित नभएको भन्दै बस व्यवशायीद्वारा पार्किङ बहिष्कार, आज विहान दुई घण�
हालै सञ्चालनमा आएको टीकापुर नगरपालिकास्थित सिटी बसपार्क व्यवस्थित नभएको भन्दै बस व्यवशायीहरुले पार्किङ बहिष्कार गरेका छन । उनीहरुले शनिवार दुई घण्टा यातायात सेवा अवरुद्ध गरी विरोध जनाएका छन ।
उनीहरुले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरी चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । व्यवशायीहरुले सिटी बसपार्क व्यवस्थित गर्न नगरपालिकासँग माग गरेका छन् । सिटी बसपार्कमा बस पार्किङ गर्दा भासिने, यात्रु प्रतिक्षालयको अभाव लगायतका समस्या रहेको बस व्यवशायीहरुले बताएका छन् ।
यसअघि अस्पताल रोड नजिकैको खडक चोकमा बस पार्किङ हुँदै आएका थियो । खडक चोकमा बस पार्किङ गर्दा सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या आउनुका साथै सर्वसाधारणको हिँडडुलमा समेत कठिनाई भैरहेको थियो ।
सडक किनारमै बस पार्किङ गर्दा समस्या भएको ब्यापक जनगुनासो भएपछि खडक चोकको सट्टा सिटी बसपार्कमा पार्किङ गर्ने सहमति भएको थियो । यही साउन १४ गते भएको सहमति अनुसार १५ गतेदेखी सिटी बसपार्क सञ्चालनमा आएको थियो । यातायात व्यवशायी, नगरपालिका, ट्राफिक प्रहरी र राजनैतिक दलहरुबीच खडक चोकमा पार्किङ नगर्ने सहमति भएको थियो ।
तर सहमति विपरित यातायात व्यवशायीहरुले बसपार्क व्यवस्थित नभएको भन्दै खडक चोकमै पार्किङको व्यवस्था गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन । उनीहरु आफैले गरेको सहमति विपरित माग अघि सारेर विरोधमा उत्रिएका छन ।
टीकापुरबाट सुदूरपश्चिम यातायात र कर्णाली रिभर यातायातका दिवा र रात्री सेवाका बसहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन । दुईवटै समितिका धनगढीसम्मका लागि दिवा सेवाका बस १०÷१० मिनेटको फरकमा छुट्ने गरेका छन ।
यसअघि टीकापुरको मुख्य बसपार्कबाट छुटेको बस यात्रुको प्रतिक्षामा खडक चोकमा १० मिनेट पार्किङ गरिदै आएको छ । आगामी दिनमा समेत खडक चोकमा बस पार्किङ गर्न पाउनुपर्ने कर्णाली रिभर यातायातका हिक्मत खड्काले बताउनुभयो ।
खडक चोकमा बस पार्किङ नगर्दा बजार क्षेत्रका बासिन्दाले करिव २ किलोमिटर टाढा रहेको सिटी बसपार्कसम्म जानुपर्ने वाध्यता आएको छ । यात्रुको सहजताका लागि भएपनि खडक चोकमा बस पार्किङ गर्न पाउनुपर्ने व्यवशायीहरुको माग छ । स्थानीयले भने खडक चोकमा बस पार्किङ गर्दा हिँडडुलमा समेत निकै समस्या हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
हेलो भन्छिन आमा नेपाली पुनः प्रसारण1:15 pm- 1:45 pm
देउडा चौतारी6:30 pm- 7:00 pm
अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा टीकापुरमा विविध कार्यक्रम
राजी तथा बादी समुदायको हक अधिकार सुनिश्चितका लागि एक दिने अन्तक्रिया
स्थानीय डकर्मीलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण गर्न सघाउन आयोजना गरिएको सात दिने तालिम सम�
टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ३ को सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम
टीकापुरमा एस आर आइ विधि तथा लाइनमा सामुहिक रुपमा धान रोपाई शुरु
प्रदेश नं. ७ को बजेट माथी प्रदेश सभाषदका आ आफ्नै प्रतिक्रिया, वजेट जनमुखी भएकोले कार्यान्वयन गर्�
प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार २०७४÷०७५ का लागि टीकापुरका दिपक आउजी छानिय, राम्रो गर्ने हो भने जुनस�
विशालनगर सुकुम्बासी एकता समाज टीकापुरले धिर्जा देवि गाहामगरको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय नया कार्
पत्रकार विष्टमाथि निर्घात कुटपिट